GB ကို Labs က Backblaze B2 မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့အတူအလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြေညာ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » GB ကို Labs က Backblaze B2 မိုဃ်းတိမ်ကိုသိုလှောင်မှုနဲ့အတူအလိုအလျောက်ပေါင်းစည်းမှုကိုကြေညာ
ဖတ်ဗြိတိန်, 17 ဇွန်လ 2019 - GB ကို Labs က, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အစွမ်းထက်နှင့်အသိဉာဏ်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဆန်းသစ်တီထွင်သူများ၎င်း၏ CORE.2 OS ကိုတွင်ပါရှိသော GB ကို Labs ကအလိုအလျောက်အတူ San Mateo ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Backblaze ရဲ့ B4 cloud storage service ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
GB ကို Labs ကအလိုအလျောက်မဟုတ်ရင်ငွီးငှေ့ဖှယျနှင့်ထပ်တလဲလဲလက်စွဲစာအုပ်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်မယ်လို့တာဝန်များကို streamlines ထားတဲ့ဖိုင်တွဲအဆငျ့မှာ script ကိုအသုံးဝင်သော Workflows မှအသုံးပြုသူများကို enable ။
မျိုးစုံ, အသုံးပြုသူ-တိကျတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာတာဝန်များကိုအလိုအလျောက်တစ်ခုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှု, ဆွဲ-and တစ်စက်ထုံးစံ၌ GB ကို Labs ကနည်းပညာကို အသုံးပြု. scripted နိုင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 100 လုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် Backblaze B2 backup လုပ်ထားနှင့်အတူ, GB ကို Labs ကအသုံးပြုသူများကို GB ကို Labs ကပွားနှင့်အတူဒေတာတိုက်ဆိုင်ညှိယူသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာသိုလှောင်မှုဆင်းပွားများအတွက်အရင်းအမြစ်အဖြစ် Backblaze B2 သုံးစွဲဖို့ GB ကို Labs ကအလိုအလျောက် script များကိုသုံးနိုင်သည်။
အရပျ၌ GB ကို Labs ကအလိုအလျောက်နှင့်အတူ, အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် folder ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဖိုင်များအားလုံးကူးယူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ Backblaze B2 တိမ်တိုက် Service ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်သေချာစေရန်မိမိတို့၏အသိဉာဏျသိုလှောင်မှုစနစ်တို့ကိုသွန်သင်နိုင်ပါတယ်; Nebula; SohoNet; Dropbox ကို; သို့မဟုတ်အမေဇုံတိမ်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီဥပမာမှာတော့ Backblaze အသုံးပြုသူများသည်မိုဃ်းတိမ်တိုက်ရိုက်နားမှာပေါက်သောမြက်ပင်မော်ကွန်းတင်နိုင်ပြီး GB ကို Labs ကတဆင့်အလိုအလျောက် archive ကို process ကိုအောင်မြင်သောဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်အကြောင်းကြားစာလက်ခံရရှိသည်။
အရောင်း၏ Backblaze VP နှင့်ကုန်ပစ္စည်း Nilay Patel ကကဖန်တီးမှုဖောက်သည်ရင်ဆိုင်ရကြောင်းစိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ CORE.4 အတွက် GB ကို Labs ကအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ GB ကို Labs ကဖြေရှင်းချက်သို့ Backblaze B2 ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဖောက်သည်များယခုမိုဃ်းတိမ်သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှု Workflows တိုးချဲ့ဖို့ရိုးရှင်းပြီးအစွမ်းထက်လမ်းရှိသည်။ "
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီများသည် backup လုပ်ထားနှင့်သိမ်းဆည်းမဟာဗျူဟာများအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ချောမွေ့ရန်, မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသွားမည်ပါပြီ။ သို့သျောလညျးအဘယျသို့တိပ်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ backup လုပ်ထားအဖြစ်စတင် 4K, UHD နှင့် 8K အကြောင်းအရာများအတွက်ကျယ်ပြန့်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်လာတယ်။ မီဒီယာဖိုင်အစဉ်အဆက်ပိုကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်သကဲ့သို့, မရှိတော့ Non-ထုတ်လုပ်မှုနာရီအတွင်းအမှုကိုပြုခံရဖို့နိုငျခဲ့ကွပါဆုံးအရာ၏စီမံကိန်းများ, ထရန်ကူး task ကိုပြုလေ၏။
LTO-7 တိပ်ဒေတာသိုလှောင်မှု 300MB / s နဲ့ရေးဦးရေအများဆုံးကန့်သတ်ထားမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားချဉ်းကပ်ယူကြရသည်။ အွန်လိုင်းသိုလှောင်မှုမှအနီးရှိလိုင်းသိုလှောင်မှုဖို့မိတ္တူကိုလျင်မြန်စွာအလုံအလောက်နေ့ချင်းညချင်းဖွစျနိုငျ, ပြီးတော့အနီး line ကနေတိပ်ဖို့မိတ္တူကိုမဆိုမှာနေရာတစ်နေရာယူနိုင်ကြောင်းသိရပါအံ့ဤ disk ကို-to-disk ကို-to-တိပ် (D2D2T) Workflows ၏ပုံစံသညျ လာ. အချိန်, ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းမှုဖွင့်လွတ်မြောက်စေဖို့။
GB ကို Labs ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကုန်ပစ္စည်းအရာရှိချုပ် Duncan က Beatty ဖြစ်နိုင်သော clients များဟာအလွန်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောနှင့်မြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်အထိရောက်ဆုံးလမ်းအတွက် backup လုပ်ထားအလိုအလျောက်မှ Backblaze B2 နှငျ့အလုပျလုပျ "ကဆက်ပြောသည်။ ဒါက GB ကို Labs က toolset များ၏စွမ်းရည်များချဲ့ထွင်, ဒါပေမယ့်လည်း Backblaze B2 နဲ့ GB Labs က CORE.4 OS ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့်အလွန်ပြည့်မီနိုင်မျိုးစပ်သောမိုဃ်းတိမ်ကို backup လုပ်ထားအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းမသာ။ "
Backblaze လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနည်း cloud storage နဲ့ cloud backup service များကိုကယ်တင်တတ်၏။ B2 Cloud သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းဒေတာ Egress အတွက်ဒေတာသိုလှောင်မှုနဲ့ $ 0.005 / GB ကိုများအတွက်ရုံ $ 0.01 / GB ကို / လဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော် Backblaze စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှင့်ရာပေါင်းများစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 150 ကျော်နိုင်ငံများတွင်အသုံးပြုသူများကိုသောင်းနဲ့ချီများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော cloud storage provider ကဖြစ်ခဲ့သည်။ ထူးခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့စှာ၏အရွယ်မှာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် Backblaze Vault ဗိသုကာသို့စီစဉ်ပေးဆန်းသစ်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆသိုလှောင်မှုသီးတောင့်အပေါ်အချက်အလက်များ၏ 750 petabytes ကျော်ယနေ့ Backblaze စတိုးဆိုင်များ။ , Hard Drive ကို Stats ကတော့သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်သုံးလပတ် open-source သိုလှောင် Pod ဒီဇိုင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်မဟုတ်ရင်ဒီလိုပါပဲ cloud storage စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပွင့်လင်းနှင့်ပွင့်လင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများ။
Backblaze အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.backblaze.com
အသံလွှင့်အိန္ဒိယမှာမောရှေနှင့် CORE.4 Lite ကို Demo မှ NCS Techno စနစ်များနှင့်အတူ GB ကို Labs ကမိတ်ဖက် - အောက်တိုဘာလ 7, 2019
4K 8K အမေဇုံတိမ်တိုက်ဝန်ဆောင်မှု အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု Backblaze B2 Cloud သိုလှောင်မှုဝန်ဆောင်မှု dropbox GB ကို Labs က ပေါင်းစည်းမှု Nebula အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome, MStar, CES2017 Sohonet လှံ & Arrows မိုးတိမ် TVU ကွန်ယက် UHD က Ultra HD ဖိုရမ် Workflows	2019-06-17
ယခင်: TV18 အသံလွှင့်အိန္ဒိယကျော် 100 LiveU LU600 HEVC ယူနစ်နှင့်အတူ၎င်း၏ Newsgathering စစ်ဆင်ရေးကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်
နောက်တစ်ခု: Luma Touch ကိုမိတ်ဆက် Highly-မျှော်လင့် Upgrade